Kedu ihe kpatara Peristaltic Pumps kacha mma na njikwa mmiri na -ekpofu ahịhịa
N'ime afọ ndị na -adịbeghị anya, site na ọganihu na -aga n'ihu nke imepe ụlọ na ime obodo, akụnụba mmekọrịta mmadụ na ibe ya etolitela ngwa ngwa, mana nsogbu mmetọ na -esote abụrụla okwu dị mkpa nke achọrọ ka e dozie ya ngwa ngwa. Usoro ọgwụgwọ mmiri nchafu ejirila nwayọọ nwayọọ dị oke mkpa maka akụ na ụba ...
Kedu otu esi ahọrọ mgbapụta Peristaltic kwesịrị ekwesị?
Iji họrọ mgbapụta peristaltic kwesịrị ekwesị, buru ụzọ chọpụta ngwa chọrọ: 1. Kpebie ọnụego ọmụrụ nwa 2. Kedu ụdị igwe ekwesịrị ibugharị 3. Nyefee izizi 4. Ọnụ ọgụgụ ọwa chọrọ 5. Oke nrụgide, usoro njikwa, wdg. The peristaltic mgbapụta bụ tumadi dere ...
Mgbe ịzụrụ mgbapụta peristaltic gịnị ka ị ga -elebara anya?
Kedu ihe bụ mgbapụta peristaltic? Peristaltic pump, nke a makwaara dị ka mgbapụta tubing, bụ ụdị mgbapụta ụlọ ọrụ ọhụrụ. Mgbapụta peristaltic nwere akụkụ atọ: ọkwọ ụgbọ ala peristaltic, isi mgbapụta na tubing mgbapụta peristaltic. Plọpịpịpịpịpịkị pọmpụ bụ naanị ihe achọrọ maka njikọ mmiri mmiri maka perista ...
A na -eji mgbapụta Peristaltic eji na Ngwa Laboratory
Ihe mgbapụta peristaltic na -eji mgbe niile na ụlọ ọrụ nyocha. Ụlọ nyocha bụ ebe mmụta sayensị ma na -arụ ọrụ dị oke mkpa na mmepe sayensị na teknụzụ. Yabụ, ụlọ nyocha nwere ihe siri ezigbo ike maka akụrụngwa nnyefe mmiri: 1. Oke mmiri ahụ sara mbara ma gbasaa ...
Ahịa mgbapụta Peristaltic, ọkachamara ọkachamara ihe ngwọta mmiri sitere na China.We na-enye mgbapụta peristaltic dị elu na imepụta mgbapụta peristaltic, afọ 20 nke ahụmịhe mgbapụta peristaltic, anyị na-aga n'ihu na-emepụta ihe ma kwalite ngwaahịa, gbalịsie ike ịbụ ọkachamara na ụlọ ọrụ mmiri mmiri, dozie mmiri mmiri ihe ngwọta maka ...
Kedu ihe dị iche n'etiti mgbapụta peristaltic laabu na mgbapụta peristaltic ụlọ ọrụ ndị ọzọ?
Nfuli Peristaltic, ọtụtụ ndị na -eche maka akụrụngwa ejiri na ụlọ nyocha. Ọ bụ mgbapụta peristaltic laabu. Chee na naanị ụlọ nyocha ga -eji nfuli peristaltic, N'eziokwu, a na -ejikwa ya na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, naanị n'ihi na ejiri ya na mbụ n'ụlọ nyocha. Kedu ihe dị iche nzọ ...
Ngwa mgbapụta Peristaltic Na mmanụ anwụrụ ọkụ elektrọnik
Mmanụ sịga eletrọnịkị bụkwa ndochi E-mmiri, a na-emepụta ụdị e-mmiri a site na ahịrị ndochi, nke bụ nke ngwa sistemụ mgbapụta peristaltic. Ka anyị webata gị mgbapụta Pist Fluid peristaltic. E-mmiri mmepụta usoro The electronic sịga mmanụ jupụta ...
Kedu otu esi ahọrọ tubing mgbapụta peristaltic?
Mgbapụta peristaltic nwere akụkụ atọ: ọkwọ ụgbọ ala, isi mgbapụta na tubing mgbapụta peristaltic. Ihe mgbapụta peristaltic na -arụ ọrụ site na ịpị tubing mgbapụta peristaltic na rola ma ọ bụ pịa. N'ime ọrụ mgbapụta peristaltic, ọkpọ mgbapụta peristaltic bụ ihe oriri. Yabụ họrọ mgbapụta peritaltic ziri ezi, anyị a ...
Kedu ihe mgbapụta mmiri peristaltic na -ebute mmiri mmiri ga -eme ihu ụdị Delta?
Kedu ihe mgbapụta mmiri peristaltic na -ebute mmiri mmiri ga -eme ihu ụdị Delta? A na-ejikwa nfuli Peristaltic na-emepụta ọgwụ mgbochi 2019-nCoV. Kedu njikọ ndị a na -eji nfuli peristaltic eme ihe? N'oge na -adịbeghị anya, ọnọdụ ọrịa na mba dị iche iche adịla njọ ọzọ. Njirimara nke Delta v ...
Etu esi eji sistemu na -ejuputa Peristaltic Pump DS600?
Etu esi eji sistemụ mgbapụta China peristaltic DS600? Usoro ndu usoro DS600 Series Peristaltic Pump Fill System Multi-channel, sistemụ ndozi dị elu, usoro ntụpọ mgbapụta usoro mgbapụta mgbapụta mmiri mmiri, nke emere maka isi mmiri zuru oke nwere oke, isi ọ bụla nwere ike ịbụ ...
Mgbe anyị na -eji mgbapụta peristaltic na -asọfe iji nyefee mmiri mmiri, anyị ga -achọpụta na mmiri dị na pipeline anaghị akwụsị ịgbaba ozugbo, ọ na -agbada nwayọ. Ọ bụghị na mgbapụta ahụ na -akwụsị ịtụgharị na mmiri mmiri na -akwụsị ịgbada n'echiche anyị, mana mmiri mmiri na -akwụsị ịgba ...